Shiinaha Gelatin warshaddii looxa iyo alaableyda | Gelken
Goorma gelatin daawo ah waxaa loo isticmaalaa kiniin wax soo saar, waxaa loo isticmaali karaa sida xarkaha kiniiniga ama dahaadhka kiniinka. Sababtoo ah saameynta xabagta ee gelatin, kiniiniyada waxay leeyihiin xabag, adkeysi heerkulka iyo adkaanta.
Kiniinku sidoo kale waa qaabka qiyaasta daawada caadiga ah ee warshadaha dawooyinka. Xalka biyaha ee gelatin wuxuu leeyahay hawo gaar ah iyo waxyaabo sameysmo filim, taas oo ku fadhida boos barnaamijyadan. Waxaa loo isticmaali karaa sida xarkaha kiniiniga ama walxaha go'doominka ah ee kiniinka dahaarka leh ee sonkorta leh
Gelatin badanaa waxaa lagu dahaadhaa dusha kaniiniga ka dib marka la buuxiyo budada qoyan, halka gelatin haydheeysan si toos ah loogu quseyn karo kaniiniga. 10% si looga fogaado jiiniska. Jaangooyada caadiga ahi waxay leedahay xoog dhejis ah marka loo eego gelatin-biyoodka, iyo tan ka sii muhiimsan, waxay leedahay dhejis adag.
Gelken waxay siisaa gelatin kiniin ka badan 7 sano. Waxaan u siineynaa gelatin warshadaha dawooyinka badan sida Hindiya, Vietnam, Thailand iyo wixii la mid ah. Waqtigan xaadirka ah, waxaan ka helnaa jawaab celin wanaagsan macaamiisheena.
Shuruudaha Imtixaanka Pharm Shiinaha PharmacopoeiaDaabacaadda 2015 Looxa
1. Xoog Jelly (6.67%) 100-180bloom
17 .Tirinta Bakteeriyada Guud C10cfu / g
Hore: Gelatin loogu talagalay Softgel
Xiga: Kosher Gelatin